June | 2009 | MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA
>INSIDE BURMA NOW-A-DAY (5) June 28, 2009
Filed under: INSIDE BURMA NOW-A-DAY,OTHERS' NEWS,PHOTOS — Nyo Gyi @ 7:56 am
ကဲဗျာ… ဖတ်ရတဲ့ ဗမာပြည်ဂျာနယ် သတင်းတွေထဲက ၀မ်းနည်းစရာ သတင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့ဗျာ။
အိမ်သာကျွင်းထဲကျတဲ့ လက်စွပ် သုံးသောင်းတန်လေးဆယ်ဖို့ (ဆယ်ခအနေနဲ့ လက်စွပ်တန်ဖိုးရဲ့ တစ်ဝက်ပဲ ရမှာနော်)အတွက် လူနှစ်ယောက်သေ၊ တစ်ယောက်ဆေးရုံပေါ်မှာ သေလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ရတာလေ။
ဗမာပြည်ကလူတွေ အသိဥာဏ်ပညာရော၊ ဘ၀တွေပါ ဆင်းရဲနုံချာနေပုံများပြောပါတယ်…
(From The Voice Weekly Journal)
ရေတွင်းထဲပြုတ်ကျတဲ့ ရေပုံးလေးဆင်းဆယ်ရင်း လူသုံးယောက် သေခဲ့ရတာလေဗျာ…
(From7Day News Journal)
ဒီဓာတ်ပုံကတော့ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဗမာပြည်က မရိုးနိုင်တဲ့ သူတောင်းစား ဓာတ်ပုံလေးပါ။ ရန်ကုန် သမ္မတ ရုပ်ရှင်ရုံအနီးက လူသွားလမ်းပေါ်က သူတောင်စားသားအမိ(လို့ထင်ရတာပဲ၊ Slumdog ဇာတ်ကားထဲကလို သူတောင်းစားဂိုဏ်းဝင်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေ)ပါ။
သြော်တိုးတက်လိုက်တဲ့ တို့ဗမာ့တိုင်းပြည်။ ဘယ်ခေတ်နဲ့မှကို မတူဘူးဗျို့။
သူတောင်းစား၊ ပြည့်တန်ဆာများဦးရေ… တိုးတက်လာပုံ…။
(Photo By BigBBrown)
INSIDE BURMA NOW-A-DAY (Part 1 to 5)
INSIDE BURMA NOW-A-DAY (5)
>NYO GYI’S 64 WORDS FOR DAW AUNG SAN SUU KYI June 20, 2009
Filed under: DAW AUNG SAN SU KYI,DAYS TOPICS,MY POEMS (English Language),MY WRITING — Nyo Gyi @ 5:41 pm
Mother Aung San Suu Kyi!
You are in the age of 65 years.
We love you, we believe you, and we are waiting for your freedom.
You love us, you want us to be rich and healthy, and you are fighting for our freedom.
On behalf of our people of Burma,
We always support you forever!
NYO GYI’S 64 WORDS FOR DAW AUNG SAN SUU KYI
Filed under: DAW AUNG SU KYI,DAYS TOPICS,MY POEMS (English Language),MY WRITING — Nyo Gyi @ 5:41 pm
>Sasanamoli (India)’s Letter for Birthdays (64 Aung San Suu Kyi and 30 Gam B Ra)
Filed under: DAW AUNG SAN SU KYI,OTHERS' WRITINGS — Nyo Gyi @ 11:32 am
(page – 1)
(page – 2)
Sasanamoli (India)’s Letter for Birthdays (64 Aung San Suu Kyi and 30 Gam B Ra)
Filed under: DAW AUNG SU KYI,OTHERS' WRITINGS — Nyo Gyi @ 11:32 am
>Let’s Do Something at Daw Aung San Suu Kyi’s Birthday June 18, 2009
Filed under: DAW AUNG SAN SU KYI,OTHERS' NEWS — Nyo Gyi @ 6:21 pm
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့  (၆၄)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ (၁၉၊ ဇွန်၊ ၂၀၀၉) နေ့မှာမြန်မာပြည်တွင်းမှ ပြည်သူပြည်သားများအနေနှင့် မိမိတို့ တတ်စွမ်းသမျှ၊ တတ်စွမ်းသည့် နည်းတစ်ခုခုဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးကို တောင်းဆိုကြပါစို့။
(Attached News Source : http://burmese.dvb.no/news.php?id=7786)
(Attached DASSK’s Photo Source : http://drlunswe.blogspot.com)